Madaxtooyada Somaliland Oo Qorshaynaysa In Wasiir Sacad Cali Shire … | Saxil News Network
Madaxtooyada Somaliland Oo Qorshaynaysa In Wasiir Sacad Cali Shire …
January 16, 2017 - Written by Abdisalaan Harir
Hargeysa (Saxilnews):- Khilaafkii u dhexeeyey wasiirka arrimaha dibadda Sacad Cali Shire
iyo Madaxtooyada Somaliland ayaa lagu dhameeyey is afgarad iyo wadahadal kadib markii ay shakhsiyaad is xilqaamay soo faragaliyeen xaaladda labada dhinac.
Sacad Cali Shire ayaa ku sigtay inuu is-casilo, kadib markii ay isa seegeen Madaxtooyada oo saluugtay hadal uu warbaahinta ka sii daayay oo khuseeyey saldhiga Imaaraadkku ka samaysanayo magaalada Berbera.
Hadaba warar aad loogu kalsoonyahay oo Madaxxtooyada ku dhaw ayaa sheegaya in heshiiska dhexmaray Sacad Cali Shire iyo Madaxtooyada looga faa’iidaysan doono inuu saxeexo heshiiska Imaaraadka iyo Somaliland ee saldhiga laga siinayo garoonka diyaaradaha ee Berbera.
Sacad Cali Shire oo hore u saxeexay heshiiskii dekedda Berbera ee dhexmaray xukuumadda iyo DP World ayaa la sheegay inay Madaxtooyadu qorshaynayso in mar kale uu gacantiisa ku saxeexo heshiiskan oo ay dabada ka riixayaan isla xubnihii dabada ka riixayay heshiiskii DP World.
Geesta kale wararka ayaa intaas ku daraya inaanu Wasiir Sacad ku talo jirin inuu mar kale gacantiisa ku saxeexo heshiis mad-madawgiisa leh oo ay dad gaar ahi ku munaafacaadsanayaan, iyadoo ay xusid mudan tahay inuu heshiiskii DP World faa’iido wayn dalka u lahaa hadana waxaa soo baxay gacmo badan oo dano gaar ah ka dhex eegeyey heshiiska.
Sacad Cali Shire ayaa lagu tilmaamaa wasiir gooni socod ah oo si daacadnimo ku jirto xilkiisa u guta, mana aha shakhsiyaadka hantida qaranka ku tagrifala, haddii se uu heshiiskan saxeexo waxay noqon doontaa markii labaad ee hanti qaranku leeyahay wajigiisa loo isticmaalo, maadaama uu ka soo jeedo gobolka Saaxil oo heshiiskani salka ku hayo.